Ogaden News Agency (ONA) – Farmaajo oo Gudi u Magacaabay Shilkii Ciidanka Qaranka Dhexmaray.
Farmaajo oo Gudi u Magacaabay Shilkii Ciidanka Qaranka Dhexmaray.
Madaxweyne Maxamed Farmaajo ayaa isugu yeedhay guddiga Amniga ee Dowladdiisa, waxaana kamid ahaa Wasiirada, Amniga, Arrimaha Gudaha, Maaliyadda, Taliyaasha ciidanka qalabka sida, Taliyaha Booliska iyo taliyaasha Sirdoonka.
Shirkan ayaa daba socdey kadib markii arbacadii is rasaasayn dhex martey ciidamo ka wada tirsan kuwa Dolwaladda, waxaana is rasaaseyntii labaad dhex-martey ciidamada loo xilsaarey xasilinta iyo nabadda Muqdisho iyo ciidanka ilaalada Madaxtooyada. Dagaalkaas waxaa ku nafwaayey saddex askeri.
Mudane Farmaajo ayaa u magacaabey dhacdadan baadhitaankeeda guddi, waxaana guddoomiye looga dhigey Taliyaha Booliska Gen. Cabdixakiin Daahir Siciid. Guddiga oo kormeer ku sameeyey ciidamada gacan ka hadalku dhexmarey booqdeyna goobtihii la isku rasaaseeyey ayaa sheegay in dhacdadan ahayd mid fool xun oo laga xumaado, iyaga oo xaqiijiyey in gacanta lagu hayo dhammaan dadkii ku lug lahaa falkan.
Taliyaha Booliska Gen. Cabdixakiin Daahir Siciid ayaa sheegay in ay sida ugu dhakhsiyaha badan u soo gudbinayaan sida wax u dhaceen markii ay baaritaanka soo dhameeyaan waa sida uu hadalka u dhigaye.